2021 ခုနှစ် LEGO Singles' Day - Brick Fanatics
2021 ခုနှစ် LEGO Singles' Day
သင်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ကျောက်ဆောင်တစ်ခုအောက်တွင် နေထိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိလျှင် သို့မဟုတ် သင်၏စိတ်ထဲတွင် စွဲလမ်းလွန်းနေပေမည်။ Lego Architecture သတိပြုမိရန်သတ်မှတ်ထားသည် - သင်အားလုံးအကြောင်းသိကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့. ဒါပေမယ့် Singles' Day လို့ခေါ်တဲ့ တခြားဈေးဝယ်ထွက်တဲ့ ဘိုနန်ဇာအကြောင်း သင်သိပါသလား။ Singles' Day က ဘယ်အချိန်လဲလို့ မေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ပြက္ခဒိန်မှာ အမှတ်အသားပြုဖို့ ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့နေ့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်အားလုံးကို ဆက်ဖတ်ပါ။
Singles' Day ဆိုတာ ဘာလဲ။
Singles' Day သည် အထီးကျန်သူကို ဂုဏ်ပြုသည့် တရားဝင်မဟုတ်သော တရုတ်အားလပ်ရက်ဖြစ်သည်။artငါတို့ကြားမှာ ပစ္စယောart ပွဲတော်များ၏ Singles' Day သည် အွန်လိုင်းရောင်းချမှုအတွက် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံးဈေးဝယ်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ မူလက Bachelors' Day ဟုခေါ်သော ပွဲသည် ယခုအခါ ပိုမိုပါဝင်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ရေပန်းစားသော ပွဲတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သြစတြေးလျတွင် Click Frenzy ဟုလည်းလူသိများသော အယူအဆသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း UK နှင့် United States ကဲ့သို့သောနေရာများတွင် ဆွဲဆောင်မှုရှိလာခဲ့ပြီး အဓိပ္ပါယ်မှာ Singles' Day 2020 ထက် ယခုအကြိမ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုကြီးမားသောအချိန်အခါသမယတွင် ရှိနေနိုင်သည်။
2021 ခုနှစ် Singles' Day က ဘယ်အချိန်မှာလဲ။
2021 ခုနှစ်၏ တစ်ကိုယ်ရေနေ့သည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနှင့် အတိအကျတူပါသည်- နိုဝင်ဘာ 11။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နံပါတ်တစ်အတွက် တရုတ်သင်္ကေတသည် အိမ်ထောင်မပြုသူအတွက် ဗန်းစကားဖြစ်သည့် တုတ်ဗလာနှင့် ဆင်တူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ မိသားစုသစ်ပင်မှာ မင်း p ကရတဲ့ အကိုင်းအခက်တွေ မရှိဘူး။artစိတ်ရှုပ်နေလား - နားလည်လား။ ထို့ကြောင့် နိုဝင်ဘာလ 11 သို့မဟုတ် 11/11 ကို ၎င်း၏ single လေးခု၏ကိုယ်စားပြုမှုအတွက် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Click Frenzy ဆိုတာဘာလဲ။
Click Frenzy သည် သြစတြေးလျ၏ အဖြေဖြစ်သည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ နှင့် Singles' Day. Singles' Day သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ပျံ့နှံ့လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပွဲများစွာရှိသည့် Click Frenzy တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းတွင် Valentine's Day အစီအစဉ်၊ May's Click Frenzy Mayhem၊ ဇူလိုင်လတွင် Click Frenzy Julove နှင့် နိုဝင်ဘာလ၏ အဓိကဖြစ်ရပ်တို့ ပါဝင်သည်။ 2021 ခုနှစ်တွင် ၎င်းသည် အင်္ဂါနေ့ နိုဝင်ဘာလ 8 ရက်နေ့ နံနက်9နာရီတွင် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းစျေးဝယ် Utopia ၏ 53 နာရီကြာလည်ပတ်သည်။
Singles' Day LEGO ရောင်းချခြင်း။
သင်ဟာ Singles' Day လက်ဆောင်တစ်ခုအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပေးဆောင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် လူပျိုကြီး ဒါမှမဟုတ် လူပျိုကြီးတစ်ယောက်အတွက် အထူးတစ်ခုခုကို ရွေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Lego ဤအတော်လေးအားလပ်ရက်အသစ်၏ သဘောတရားဖြင့် အုပ်စုဖွဲ့လိုက်ပါပြီ။ ပွဲအတွက် သီးသန့် စာမျက်နှာတစ်ခုရှိပါတယ်။ LEGO.comစိတ်လှုပ်ရှားစရာအချို့ကို မြင်တွေ့ရတော့မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကို ယုံကြည်စေသည်။ Lego 2021 ခုနှစ်ရဲ့ Singles' Day သဘောတူညီချက်များ။ ၎င်းသည် ဤအဆင့်တွင် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော တွေးခေါ်မှုများ ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်နေပါသည်။ Lego လနှောင်းပိုင်းတွင် တွေ့ရမည့် တူညီသော စျေးနှုန်းများဖြင့် အဖွဲ့အား အားလပ်ရက်တွင် အားလုံးထွက်ပါသည်။
LEGO Click Frenzy အပေးအယူများ
Singles' Day ၏ ရှေ့ပြေးနိမိတ်အဖြစ်၊ Lego Group က st ကိုသုံးနိုင်တယ်။art ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရောင်းချမှုကို တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်ရန် Click Frenzy အရောင်းရက်စွဲသည် ရက်အနည်းငယ်စောသည်။ အဖွဲ့၏ Click Frenzy အပေးအယူများသည် ယခုနှစ်အတွင်း ကျဆင်းသွားသည်ကို မြင်တွေ့နိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ Lego 31203 World Map နှင့် 10279 Volkswagen T2 CamperVan ကဲ့သို့သော အစုံများဖြင့် အောက်မှ စုဆောင်းသူများ၊artထူးခြားသောဖြစ်ရပ်။ Click Frenzy နှင့် Singles' Day Jamboree အတွက် မည်သည့် collections များက နှစ်သက်သဘောကျကြမည်ကို စောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ချက် Lego VIP အမှတ်များသည် အစွန်းအထင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။art ၏ Black ကသောကြာနေ့-ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ ရောင်းအား၊ ပြီးတော့ ဒီနှစ်မှာ Singles' Day နဲ့ Click Frenzy အတွက် သူတို့ကို ထုတ်ပေးတာကို တွေ့နိုင်တယ်။ အဲဒီကနေ ရွှေ့လိုက်တာ LEGO.com ဤအစောပိုင်း အရောင်းပွဲအတွက် သတိပြုမိမည်မှာ သေချာသည်၊ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ကျန်များကို ဖြန့်ကျက်ရန် အလားအလာရှိသည်။ Black ကသောကြာနေ့ ရောင်းအား။
LEGO VIP လျှော့စျေးဘောက်ချာများ
ယမန်နှစ်များအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဝက်ဈေးလျှော့စျေးဘောက်ချာများကို ဆက်ဆံခဲ့ပါသည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ အဖြစ်အပျက်၊ ဒီမှာမျှော်လင့်ချက် Lego Group သည် Singles' Day အတွက် အလားတူလုပ်ဆောင်သည်။ ဆောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ လုပ်သင့်တယ်။ Lego VIP အမှတ်များ၊ ၎င်းသည် ပေါင် 20 ဘောက်ချာနှင့်ညီမျှသော အမှတ် 1,600 အတွက် £10 လျှော့စျေးဘောက်ချာကို သင်ရရှိနိုင်မည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ဒါက ရဖို့ နောက်ထပ် အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခု ဖြစ်မှာပါ။ Lego Click Frenzy ကို စိတ်ဝင်စားသော ပရိသတ်များ နှင့် Singles' Day ၏ သဘောတရားနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံပါ။
ဘာလက်ဆောင်တွေဝယ်ပြီးလဲဆိုတာကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ Lego အဖွဲ့မှ ကမ်းလှမ်းသည်။ Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့. ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြည့်ခြင်းဖြင့်၊ ယမန်နှစ် 40410 Charles Dickens Tribute for Singles' Day ၏မျဉ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် တစ်စုံတစ်ခုကို ရနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ Lego Group သည် တစ်ရက်တည်းအတွက် ထူးခြားသောကမ်းလှမ်းချက်ကို စုစည်းထားသည်။
Singles' Day နဲ့ အတိအကျ ဆက်စပ်မှု မရှိပေမယ့်၊ အဲဒါကို အနည်းဆုံး ကျွန်တော်တို့ သိထားပြီးသားပါ။ 40488 ကော်ဖီ Cart နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ ၆၅ ဒေါ်လာနှင့်အထက် ဝယ်ယူမှုများဖြင့် US တွင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စတော့ပြတ်ပါက၊ ထိုပရိုမိုရှင်းကာလသည် Singles' Day ကို အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။
Lego Star Wars Singles' Day စျေးနှုန်းများ
အဆိုပါတစ်ဦးအဖြစ် Lego အဖွဲ့၏အကြီးမားဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံးစုစည်းမှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့အမြဲမျှော်လင့်ပါသည်။ Lego Star Wars အစုံများသည် တစ်နှစ်တာ၏ အထင်ရှားဆုံး ဈေးဝယ်ပွဲများအတွင်း ပရိုမိုးရှင်းအာရုံကို ရရှိကြသည်။ မြန်လွန်းတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ၇၅၃၀၈ R75308-D2 or 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship အလေးချိန်လျှော့စျေးများကိုဆွဲဆောင်ရန်၊ သို့သော်သင်ဘယ်တော့မှမသိပါ။
Lego Architecture Frenzy အပေးအယူများကို နှိပ်ပါ။
Singles' Day နှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရသူများ ပိုမိုရရှိရန် နည်းဗျူဟာတစ်ခုအနေဖြင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ Lego အဖွဲ့သည် တည်နေရာအလိုက် လျှော့စျေးပေးနိုင်သည်။ Architecture ကဲ့သို့သောအစုံ 21034 လန်ဒန် UK မှာ ဒါမှမဟုတ် 21028 နယူးယောက် City US မှာ အနားယူခြင်း။ Lego Architecture ကဲ့သို့သောအစုံ 21043 San Francisco က 2021 ခုနှစ်တွင် အကောင်းဆုံး Singles' Day နှင့် Click Frenzy သဘောတူညီချက်များကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
LEGO NINJAGO Singles' Day စျေးနှုန်းများ
မကြာသေးမီက ၎င်း၏ ၁၀ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကို ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ Ninjago ရောင်းအား၏ နောက်လ သို့မဟုတ် နှစ်လကျော်တွင် အဓိက ကစားသမား ဖြစ်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ စုစည်းမှုသည် Click Frenzy 2021 ၏ကြယ်ပွင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် Zavvi နှင့် IWOOT တို့သည် မကြာသေးမီက အပါအဝင် အစုံများအတွက် စျေးနှုန်းများကို လျှော့ချထားပြီးဖြစ်သည်။ 71755 အဆုံးမဲ့ပင်လယ်၏ဘုရားကျောင်း နှင့် 71738 Zane ၏ Titan Mech တိုက်ပွဲ။ အကယ်၍ ယခုနှစ် Click Frenzy အရောင်းတွင် ပို၍ပင် ဆွဲဆောင်မှု ပါဝင်သည်။ Ninjago လျှော့စျေးများ၊ ဤနေရာတွင် တိုင်ကြားမှုများ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
Singles' Day သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဈေးဝယ်ပွဲဖြစ်ပြီး startတရုတ်နိုင်ငံတွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။
ဘယ်အချိန်က Singles' Day လဲ။
Singles' Day သည် နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလ 11 ရက်နေ့ သို့မဟုတ် 11/11 ရက်နေ့ဖြစ်သည်။ နံပါတ်တစ်အတွက် တရုတ်သင်္ကေတသည် လူတစ်ဦးအတွက် ဗန်းစကားဖြစ်သည့် တုတ်ဗလာကို ကိုယ်စားပြုသည်။
Click Frenzy သည် လူပျိုများနေ့ကို လွှမ်းခြုံရန် ရောက်ရှိလာသည့် သြစတြေးလျစျေးဝယ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
Click Frenzy ဆိုတာ ဘယ်အချိန်မှာလဲ။
2021 Click Frenzy Main Event startအင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက် ဗြိတိန်စံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီတွင် ၅၃ နာရီကြာသည်။